La Yaabka Aduunka: Gabar 10 sano jir ah oo hooyo noqotey – SBC
Mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa ee la xiriira gabdhaha saqiirada ah ee uurka qaada oo ilmo dhala ayaa ka dhacdey wadanka Mexico ka dib markii gabar yar oo 10 sano jir ah ay hooyo noqotey iyadoo dhashay wiil caafimaad qaba sida ay sheegeen saraakiisha Isbitaal haween oo ku yaal magaalo dhacda Bariga Koonfureed ee dalka Mexico.
Gabadhu waxay ku hawlan tahay xanaaneynta saqiirka ay dhashay
Gabadhan ayaa la sheegay in ay timid Isbitaalka magaalada Puebla iyadoo xaamilo ah isla markaana fool aheyd, waxaana la sheegay in xaalad caafimaad daro ay haysatey balse dhakhaatiirta ayaa ku guuleystey in gabadhaasi ay umiliyaan iyadoo bad qabta.
Agaasimaha Isbitaalka gabadhan ay ku dhalatey oo lagu magacaabo Rogelio Gonzalez ayaa sheegay in ilmihii ay gabadhaasi dhashay uu caafimaad qabo, isla markaana lagu hayo qaybta xanaanada, iyadoo hooyadiisa 10 sano jirka ah ay maalin walba ugu timaado qaybtaasi si ay ugu dhigto naaska.
Maamulka deegaankaasi ayaa haatan baaritaan ku haya xaalada gabadhan 10 sano jirka ah ay uurka ku yeelatey, iyadoo laga cabsi inay tahay arin kufsi ku timid.
Sharciga dalka Mexico ayaa meesha ka saaraya in hooyooyinka da’ada yar ilmaha laga soo xaaqo hadii aanay arintaasi aheyn mid ka dhalatey galmo kufsi.
Magaalada Puople waxaa ku badan qoysaska danyarta ah
Xaaladani ma ahan tii ugu horeysay ee ka dhacda wadanka Mexico bishii August ee sanadkii hore gabar 11 sano jir ah oo lagu soo koobay magaceeda Amalia ayaa ilmo dhicis ah dhahsy, iyadoo la sheegay in gabadhaasi uu kufsi u geystey nin qabey hooyadeed, gabadhaasi oo xiligaasi jirtey 10 sano oo kaliya.
Amalia ayaa markii kufsigaasi lagu sameeyey waxay arintaasi u sheegtey hooyadeed iyadoo isla markiiba booliiska loo gudbiyey dhacdadaasi.
cabdinuur abshir says:
wa maqadir alle allan wax walbawuu awooda
WAA DHACDOOYINKA ADUUNKA KADHACA BAY KAMID TAHAY DHACDADAAN ALLENA WAX WALBA WUU AWOODAA MRKA WALAYAAL YAAN LALAYAABIN AMUURTA ALLE
yaa cimiga dheer 10 jira yaab kkkkkkkkkkkk
lkn amay ka wan tahay oo ay tarikhda iyo dhacdoyinka ku darsanayaan wadankani macquul sax waa ra yigayaga yaa
To allah do we belong and to him shall we return waa maqadiir ta ebe alane taas iyo in kabadan ayuu aoow u lee yahay wcs
wa la yab dhacdadan kkk